Murashaxiinta Abaal-marinta Xiddiga Bisha Horyaalka Premier League Oo Lagu Dhawaaqay
HomeWararka MaantaMurashaxiinta Abaal-marinta Xiddiga Bisha Horyaalka Premier League Oo Lagu Dhawaaqay
Ciyaartoyga baasha weerarka ah uga ciyaarah kooxda Manchester City Raheem Sterling ayaa qeyb ka noqday 4 murashax oo u tartamaya xiddiga ugu wanaagsan bisha August horyaalka Premier League, kadib bilawgiisii wacnaa ee xilli ciyaareedkan curdinka ah.
Xiddigan heerka caalami ee u dhashay dalka England ayaa ban-dhig wanaagsan sameynayay tan iyo markii uu kooxda soo caga-dhigtay macalin Pep Guardiola xagaagan, isaga oo shabaqa soo taabtay laba jeer halka uu caawiyay hal gool oo kale 3-dii kulan ee ugu horeysay horyaalka English Premier League.
Xiddiga sarre ee kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa qeyb ka ah xiddigaha u tartamaya abaal-marrintan kadib markii uu door muhiim ah ka ciyaaray 3-dii kulan ee ay ciyaartay kooxdiisa xilli ciyaareedkan, isagoona meel iska dhigay ceebti xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ka qabsatay horyaalka Premier League, maadaama uu qeyb ka ahaa xiddigaha kooxda Chelsea ee ku dhammeystay kaalinta 10-aad.
Kooxda Manchester United ayaa gashay nolol cusub iyo talis kale waxaana kooxda sutida u qabtay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, sidaa darteedna Antonio Valencia ayaa qeyb ka noqday xiddigaha u sharaxan abaal-marrinta xiddiga bisha Premier League, kadib ban-dhigiisii wacnaa ee maalmaha taliska Mourinho.
Curtis Davies ayaa qeyb ka ahaa xiddigaha kooxda Hull City ku hogaamiyay ban-dhigeeda wanaagsan ee xilli ciyaareedkan, sidaa darteedna xiddigan ayaa lagu soo daray liiska xiddigaha u tartamaya abaal-marrinta xiddiga bisha ee horyaalka Premier League.
Davies ayaa sameeyay 21 dhex gal kubaddeed marka loo eego xiddigaha kale horyaalka, taas oo ka dhigan in uu heysto rikoodh 100% oo qabsashada kubaddaha ah taas oo keentay inuu ka soo muuqdo liiskan.
Balse guuleystaha abaal-marrintan ayaa lagu dhawaaqi doonaa toddobaadka soo socda, waxaana si la yaab leh looga waayay liiskan xiddigo ay ka mid yihiin Zlatan Ibrahimovic iyo Sergio Aguero, kuwaas oo ah hogaamiyeyaasha dhanka gool-dhallinta horyaalka xilli ciyaareedkan curdinka ah.